सभामुखको टोली विजयी, उपसभामुखको टोली पराजित ! – Enayanepal.com
सभामुखको टोली विजयी, उपसभामुखको टोली पराजित !
२०७६, १९ माघ आईतवार मा प्रकाशित
कर्णाली प्रदेश सभाले आफ्नो पहिलो स्थापना दिवस सुरु भएको छ । स्थापना भएको तीन वर्ष प्रवेश गर्न लागेपनि औपचारिक रुपमा स्थापना दिवस पहिलो पटक मनाउन लागिएका कारण पहिले स्थापना दिवस भनिएको थियो । सोमबार विहान १० बजे प्रदेश सभा सभामुख राजबहादुर शाहीले व्याडमिन्टन खेलेर उदघाटन गरेका छन् ।
सभामुख शाहीको नेतृत्वमा उनको जोडी गणेश देवकोटा थिए भने उनी सँग प्रतिस्पर्धा गने जोडी चन्द्रबहादुर शाही र मनोज रोकाय रहेका थियो । २३–२१, २३–२१ स्कोर भएको थियो । खेल फाइनलमा जाँदा सभामुख शाहीको टोलीले २१–१९को अन्तरमा विजयी बनेको थियो ।
तर उपसभामुख पुष्पा घर्तीको टोलीले भने हार चाख्नु प¥यो । उपसभामुख पुष्पा घर्ती र अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाको टोली चन्द्रबहादुर शाही र मनोज रोकाको टोलिसँग पराजित हुन पुगेको थियो ।
प्रदेश सरकारको राजनीतिक सल्लाहकार भीम प्रकाश शर्मा र ढुण्डी खरेलको टोली पनि पराजीत भयो । उनको टिमलाइ बलबहादुर राना र प्रताप केसीली विजयी बन्यो । लोकेन्द्र बहादुर मल्ल मुख्य एम्पाएर, अफिसियल कृष्णबहादुर अधिकारी, हरि बुढा र प्रेम शाही रहेका थिए । ुख्यम एम्पाएर मल्लका अनुसार पहिलो चरणको खेल समाप्त भएको छ । दोश्रो चरणको खेल खेल्न बाँकी छ ।
२०७४ माघ २१ गते कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । स्थापना दिवसको अवसरमा व्याडमिन्टन, कुर्सी दौड, घैंटो फोडने खेल खेलाईनेछ ।स्थापना दिवस आज उदघाटन गरिएको छ । समारोह २१ गते सम्म सञ्चालन हुने प्रदेश सभा उपसभामुख घर्तीको भनाइ छ ।
भोली अर्थात माघ २० गते ११ बजे देखि तीन बजेसम्म संघीयतका विषयमा व्यापक अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । अन्र्तक्रिया कार्यक्रमका लागि कर्णाली प्रदेशका तीन सय भन्दा बढी व्यक्तिलाई निम्तो पठाइएको सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । २१ गते शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनी, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, विद्यार्थी, शिक्षकलगायतको सहभागिता रहने उनको भनाई थियो । सोही दिन ३१० पृष्ठको स्मारिका र प्रदेश सभा सदस्यहरुको परिचय खुल्ने पुस्तकको विमोचन हुने जनाइएको छ ।